Best Teacher | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Jobs & Careers » Best Teacher
Posted by TTNU on Sep 19, 2011 in Jobs & Careers | 12 comments
Best Teacher ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာရေးချင်စရာတွေများလှပါတယ်။ဆရာမ ဖြစ်ခါစက ၊ ဖေါင်ကြီးသင်တန်းကလဲ
ဆင်းကာစ၊ တစ်တိုင်းပြည်လုံး ငါ့တာဝန်လိုလို၊ ငါမကယ် သေဖွယ်ရာ လိုလို။ ပထမဆုံး အလုပ်ဝင်တဲ့ကျောင်းက
မန္တလေးမှာ ရှေးမင်းညီမင်းသားများ တက်ခဲ့တဲ့ ကျောင်း ၊ မင်္ဂလာပါ ဆိုတာကို လက်အုပ်လေးချီပြီး နှုတ်ဆက်တဲ့
ကလေးတွေ ရှိတဲ့ကျောင်းဗျာ။ အလုပ် လုပ်လို့ ကောင်းချက်တော့ မကျန်ပါဘူး ။ ကိုယ့် စိတ်ထဲ မှာ ငါ ခိုကပ် ပျင်းရိတဲ့
ဆရာမ မဖြစ်စေရဘူး လို့ ခိုင်ခိုင်မာမာ ကြီးကို ဆုံးဖြတ်ခဲ့ တာ။
ဆရာမ ပေါက်စဘဝ နဲ့ စေတနာရယ် ကရုဏာ ဒေါသောရယ် ပေါင်းစပ်ပြီး ကြိမ်တစ်လုံးနဲ့ ဟယ်ရီပေါ်တာ လုပ်ခဲ့မိတာတွေ
အခုပြန်တွေးမိတဲ့ အခါ နောင်တ ရတဲ့ အခါ ရ မိ ပါတယ်။ ဘာမှ နည်းနည်းလေးမှ ဆရာမ ဆူတာ
ဆဲတာ နုတ်ခမ်းလေးတောင် မစူ ကြတဲ့ ချစ်သော ( ထ.၁ဝ) ကျောင်းက ကလေးတွေပါ။
ဆရာမ အတန်းက ကျောင်းသားတွေ နေ့လည်ကျောင်းပြန်တက်ချိန်မှာ လက်ဖက်ရည်
ဆိုင်ထိုင်ကြတာ ပြန်မလာကြလို့ တုတ်တစ်ချောင်းနဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထဲအထိ လိုက်သွားခေါ်ခဲ့ဘူးတယ်။
အေးအေးဆေးဆေး လိုက်လာတဲ့ သားတွေကို ကျိတ်ပြီးကျေးဇူးတင်ခဲ့ရတယ်။
သူတို့သာ ကလန်ကဆန်လုပ်ရင် ဒုက္ခနော်။
Best Teacher (4)
ဆရာကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ အားစိုက်ထုတ်ရတာတွေ အများကြီးပါ့၊ ဟိုခေတ်တုန်းက ဆရာ လည်း သိပ်မလုံလောက်
တစ်တန်းကို ကျောင်းသား (၅၀) ထက်မနည်းဘူး။ တန်းခွဲ (၅)တန်းရဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းစာအုပ်တွေ (၂) ဘာသာ အင်္ဂလိပ်စာ၊
သင်္ချာ အတွက် ယူစစ်ပြီ ဆိုရင် ကျောင်းမှာတင် မပြီးနိုင်တော့ သူတို့ ရ့ဲ အိမ်စာ ဟာ ဆရာမရဲ့  အိမ်စာ ဖြစ်သွားတော့
တာပါ့။ ဒီ စာအုပ်စည်းကြီးကို စက်ဘီးနောက်မှာ ကြိုးချည်ပြီးနေညိုချိန် အိမ်ပြန်ခဲ့ ရပါတော့တယ်။
ဆရာမဘ၀ကို ငယ်ငယ်က အရမ်းအားကျခဲ့ဖူးတယ် …ကြိမ်လုံးတစ်လုံးနဲ့ … ဖျာလိပ်တွေကို တဖြမ်းဖြမ်းရိုက်ပြီး စာသင်ရတာလည်း အမောပဲ … ။ ဆရာမတစ်ယောက် ဖြစ်ချင်ခဲ့မိတယ် … ဒါပေမဲ့… လူမှန်း သိတတ်တဲ့ အချိန်လည်းရောက်ရော … ဆရာမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကျွန်မအမေကို ကြည့်ပြီး …ဆရာလုပ်ရတာ မလွယ်မှန်းသိလာတယ် … ။ အမေကလည်းပြောပြပါတယ်… တနေ့တမျိုးမရိုးနိုင်တဲ့ သူ့ကျောင်းသားတွေအကြောင်းကို ပေါ့ …. ။ ကြားဖူး နားဝနဲ့ မြင်ဖူးတာနဲ့တင် ဆရာလုပ်ချင်စိတ်ကုန်ခမ်းသွားတော့တယ် …. ။ ဆရာလုပ်ရတာ အလွန်ခေါင်းကိုက်တဲ့ အလုပ်ပါပဲ … ၀ါသနာနဲ့ စေတနာသာ မပါလျှင် တော်တော် စိတ်ညစ်စရာ အလုပ်လို့ မြင်ပါတယ် …
၀ါသနာ စေတနာ အနစ်နာ ရင်နာ အသံနာ နှစ်လုံးနာ နဲ့နေကြရတာပါ။
အချိန်တန်လို့ ပျံသန်း သွားကြတဲ့ တပည့်လေး တွေကြည့်ပြီး
ရင်တမမ နဲ့ ချစ်နေ ကြရ တာလည်း ဒီဆရာ ပါဘဲ။
မန္တလာသူ ဆရာမလေးအတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်။ကျွန်မလဲ ဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ခဲ့ပေမယ့်။ကျောင်းသားတွေရဲ့ စိတ်ဒုက္ခတွေ
Dear Mee Mee Thaw,
I’maretired old teacher, man. Any way I owe you two words, “Thank You”.
အနော်တို့ရဲ့ စီနီယာ အကိုကြီး အခု The Ohio State University , Columbus, Ohio. မှာ research staff အနေနဲ့ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပြီ . Ph.D လည်း ပြီးသွားပြီပြောတယ်. မနှစ်က အင်တာဗျုးမှာ ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူ သင်ဆရာ မြင်ဆရာများကို ပြောတော့ တီချယ်ကို သတိတရနဲ့ပြောတာဖတ်လိုက်ရတယ်. နောက် ဂျူနီယာထဲက တယောက်ကတော့ Raffel မှာ သူ့ couch ဒီဇိုင်းကို အရွေးခံလိုက်ရတယ်ပြောတယ် သူနဲ့တွေ့တုန်း က. ပီတိကိုစားပြီး အားမွေးနေရတဲ့ ၇၀ တန်းဝင်
ဖွားဖွားဆရာမကြီး သက်ရှည်ကျန်းမာစေဖို့ ပီတိလက်ဆောင်လေးတွေ ပါးလိုက်ရပါတယ်
ဟေး ဒေါ် Pooch ရေ
နည်းနည်းလျှော့ပါ သမော်တီး ရယ်။ ပီတိကိုစား တော့နေပါတယ်။ သိပ်အားမရှိတော့လို့ Centrum
သောက်ပြီး စာဆက်သင် နေဆဲပါ။ အလောင်းစည်သူမင်းကြီးရဲ့  (ငါ မအိုသေး နဲ့ ) နာရေးလက်ကမ်းစာတွေ မှာ ရေးထားတဲ့ (ငါအိုသောအခါ) နှစ်ခုတွဲဖတ်ပြီး ချီတက်နေဆဲ။
ကိုသစ်မင်း ပြောသလို (၊ဒေါင့်ကတော့ဒူးရင်းသီးလို၊မိုက်တိမိုက်ကန်း ဒီဇိုင်းတွေလဲပါ
တကယ်လဲခင်အောင်ရင်းနှီးအောင်ပေါင်းခဲ့ပါတယ်။) အဲဒီလိုလဲ Generation Gap ကို Bridge လုပ်နေဆဲပါကွယ်။
ကိုယ်တပည့်တွေထဲမှာတွေ့ပါပြီ။ ဟစ်ပီ ယူမလား၊ဂျစ်ပစီ ယူမလား၊လမ်းသရဲ ယူမလား၊
‘အလန်းဘဲ’ ယူမလား၊ဒေါင့်ကတော့ဒူးရင်းသီးလို၊မိုက်တိမိုက်ကန်း ဒီဇိုင်းတွေလဲပါ
ပညာရေးစိတ်ပညာ မှာ သင်ခဲ့ရတဲ့ ဝါကျလေးတစ်ခု သွားသတိရလို့ပါ။
To teach John Latin, you must know both John and Latin.
တွေးနိုင်ပြောနိုင်တာတွေ့ရင်အားရလိုက်တာဗျာ။မုဒိတာထက်ပိုတယ်ဗျ။) ဆိုတဲ့ ဆရာ့ ရဲ့ လေးစားစရာ သဘောထား ထားနိုင်တာ ဆရာ သူတို့လေးတွေ ကို နားလည်လို့ပေါ့။
ဆရာသမားမိဘ ဂုဏ်ကျေးဇူးမမေ့သူ တွေ အတွက် ဘဝ သတ္တိထူးတွေ ရလာမှာပါ ဆရာရေ။
ပို့ စ်နဲ့ တော့ မဆိုင်ပါဘူး ။
တက္ကသိုလ် ကျူတာမ လေး များ က လည်း
ကျောင်းသူတွေ နဲ့ နင်လားငါလား ပဲ
ကျူတာ တွေ က လည်း
ရှိုးစမိုး အပြည့်နဲ့ 
စတိုင်တွေ မလိုင်တွေ နဲ့ 
လန်ထွက်လာကြပြီ ဗျို့ 
စေတနာ ၊ ဂရုဏာ ၊ အနစ်နာ တွေ တော့ မသိဘူး
အချစ်နာ တွေ တော့
တွေ့ လာရပြီ ဗျို့ 
ရှင်ပြောတာ လက်ခံပါတယ်။ ကျုပ်တို့ တက္ကသိုလ်တက်စဉ်တုန်းက တက္ကသီလာမြကျွန်းသာ ကဆရာမ လေးတွေ ဆိုတာ မောင်ရင့်နှယ် ကြက်သရေရှိချက် မကျန်ဘူးကွယ်ရို့ ။ ပခုံး အထက် တလွင့် လွင် ရှိနေတဲ့ ပုဝါ စလေး နှစ်ဖက် ချထားတာကိုက တယ် ယဉ်သကိုး။
အခု မောင်ရင်ပြောသလို (ရှိုးစမိုး အပြည့်နဲ့ စတိုင်တွေ မလိုင်တွေ နဲ့ လန်ထွက်လာကြပြီ ဗျို့ 
စေတနာ ၊ ဂရုဏာ ၊ အနစ်နာ တွေ တော့ မသိဘူးအချစ်နာ တွေ တော့တွေ့ လာရပြီ ဗျို့ )။ ဆိုတာတွေ ရှိကောင်းရှိနိုင်ပေမဲ့ common သိပ်မဖြစ်လှဘူး လေကွာ။
အေးလေ ပြောင်းလဲခြင်း မတူညီတော့ခြင်း စသဖြင့် စသဖြင့်…..
တပည့် မရှား ၊တစ် ပြား မရှိ
ပီတိ ကိုစားအားရှိသည် ဆိုသော ဆရာများကို ပြန်လည်တမ်း တမိပါသည်။ ရန်ကုန် ရှိ ကျောင်းများမှဆရာမများ အထူး သ ဖြင့် နာမည် ကြီး ကျောင်းများမှဆရာမများသည်ရုတ် ပျက်ဆင်းပျက်လဘ်လာဘရှာဖွေမှုများ၊ ဘက်လိုက်မှု များ ၊မျက် နှာသာပေး မှုများ ကိုဆရာမလည်းကြားသိမည်ထင်ပါသည်။ကျူ ရှင်ပြ ခြင်း ၊အပို ဝင်ငွေရှာဖွေ ခြင်း များ ကိုလက်ခံ ပါသည်။ရသောလစာနှင့် မ မျှသောအသုံးစားရိတ်ကြောင့်ဟုနားလည်ပါသည်။သို့ သော် အနာဂတ် အတွက် ကလေး များကို သင်ကြား နေသောသူများ အနေနှင့် ( ဘယ်သူသေ သေ RK ၊ အုံ —ရေပေး အကုန်ရ ) ဟူ သဘောထား မျိုး ရှိကြသည်မှာဝမ်း နည်းဖွယ် ပင်။ ကျွန် တော်သည် တချိန် က ဆရာအဖြစ် ရည်ရွယ်ခဲ့ ပါသည်။ယခုလည်း ဝါသနာပါ ဆဲ ပင် ဖြစ်သည်။ ထို့ ကြောင့်ယနေ့ ဆရာ များ အကြောင်း ကြား ရသည် တွင် ခံ စားရပါသည် ။ အပုတ် ချ ခြင်းမဟုတ်ပါ ၊ မည်သို့ မျှ လည်းတတ် နိုင်မည် မထင်ပါ ၊ စိတ် ဓတ်များ ပျက် ဆီး သွား ပြီ ဖြစ်သ ဖြင့် ဝမ်းနည်း စွာ ရင်ဖွင့် ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
( ပီ တိစား သော ဆရာများ အား ဦး ညွှတ် လျှက် )
နေရာတိုင်းမှာ အကြောင်းအကျိုး အကောင်းအဆိုးတွေ ဒွန်တွဲနေတာမို့ ကျမ တို့ ဘာမှ မကယ်နိုင်တာ အမှန်ပါ။
(သို့ သော် အနာဂတ် အတွက် ကလေး များကို သင်ကြား နေသောသူများ အနေနှင့် ( ဘယ်သူသေ သေ RK ၊ အုံ —ရေပေး အကုန်ရ ) ဟူ သဘောထား မျိုး ရှိကြသည်မှာဝမ်း နည်းဖွယ် ပင်။) ဒီလို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေ ပညာရေးလောက မှာ ဆာရာ = အရိပ် ကိုပေး၍ ငြိမ်းအေးစေသော ဆရာ ဆရာမ ဘဝ လောက ထဲမှာ မပါဝင်သင့်တာတော့ အမှန်ပါပဲ။
ကျမ Teacher trainer အနေနဲ့ တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်က ဒီ လို သဘောတရားမျိုးတွေ ဆွေးနွေး ခဲ့ ဘူးတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ကျတော့လည်း သဘောတရားနောက်ကို လက်တွေ့ က လက်တွဲ မပါသွားနိုင်တဲ့ ဘဝမျိုးတွေ ရှိတတ်တာပါဆရာရေ။ မရှက်တတ်ကြတာ ပိုဆိုးနေတာပေါ့။